Ngabe Abesilisa Nabesifazane Bakhetha Imibala Ehlukile? | Martech Zone
Ngabe Abesilisa Nabesifazane Bakhetha Imibala Ehlukile?
NgeSonto, Okthoba 25, 2015 NgeSonto, Okthoba 25, 2015 Douglas Karr
Sikhombise ama-infographics amahle kakhulu imibala ikuthinta kanjani ukuziphatha kokuthenga. Ama-Kissmetrics nawo athuthukise i infographic lokho kunikela ngokufaka okuthile ekuqondiseni ubulili obuthile.
Kwangimangaza umehluko… nokuthi lelo orenji lalibhekwa njenge ezishibhile!
Okunye Ukutholwa Kombala Nobulili
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka uvame kakhulu umbala oyintandokazi phakathi kwabesilisa nabesifazane.
Okuhlaza kuvusa imizwa yobusha, injabulo, imfudumalo, ukuqonda namandla.
Abesilisa bathambekele ekuthambekeleni ekukhanyeni okugqamile, kanti abesifazane badonsela ekuthambiseni amathoni.
Ama-20% wabesifazane aqanjwe ngombala onsundu njengombala wabo oyintandokazi.
Kusukela ngosuku lapho izingane zilethwa ekhaya futhi zigcwele izingubo zokulala ezibomvana noma eziluhlaza okwesibhakabhaka, kuye kwaba nemiphumela mayelana nobulili nombala. Yize ingekho imithetho ekhonjiwe mayelana nokuthi yimiphi imibala eyabesifazane noma eyabesilisa kuphela, kube nezifundo ezenziwa eminyakeni engamashumi ayisikhombisa edlule ezenza okuthe xaxa.
Umbala ungaba nomthelela omangalisayo emibonweni nasekuziphatheni kwabathengi. Futhi ngokuqhubekayo, kungaba nomthelela ngobulili.
Tags: achomaticibhananablueimibala ekhanyayoesinsunduushungamuikhathalophuukuqhumacayenneezishibhilei-cloverumbalaisitshalo seqandaumbala oyintandokaziOwesifazaneferni-floraubuliliamagilebhisigreenujuengachaziukwakhekalavenderokungenani umbala owuthandayoilamunaeluhlazamagentawesilisaumabhebhanai-maroonmossiwolintshii-orchidpinkipulamuPurplereduhlobo lwenhlanziigwebu lolwandleshadesisibhakabhakaimibala ethambileukuphothaEntwasahloboijikijoloi-tangerinetealamathintioluluhlaza
Uyini Umthelela Nokunye Ukuvimbela Isikhangiso?
Kungani Kufanele Utshale Imali ku-Infographics Ngokushesha
Sep 5, 2017 ngo-3: 16 PM
la mashadi ophaya ayadukisa kakhulu…. Ukhombisa umbala oyintandokazi futhi oyintandokazi encane kumashadi ophayi afanayo angenangqondo. Amashadi ophaya kufanele abonise kuphela izingxenye eziphelele, futhi kulokhu “intandokazi” ne- “intandokazi encane” “ngama-wholes” amabili ahlukene